के बिहे गर्ने उमेर पहिल्यै तय भएर आउछ ? |
बिहे गर्ने बेला भएन र? बुढेसकाल लागेपछि केटा पाइँदैन नि! यसपालि पनि विवाह नखुवाउने? आजकाल हरेक दिन यी यस्तै प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको हुन्छु। सायदै विवाह गर्न उमेर पुगेका हरेक युवायुवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो।
उमेरले २४ वर्षमा लाग्नै लागे। वरपर, छरछिमेक, आफ्न्त तिर भने विवाहको कुरा कति हो कति। लगभग दुई चार साल भयो, मान्यजनहरुले यो साल तेरो बिहे खान पाइयोस् भन्दै दशैँमा आर्शिवाद दिएका। बिहे गर्न किन मान्दिनस्? घरबाट यि यस्ता प्रश्नहरु नआएका पनि हैनन्। आजभोलि लाग्दैछ छोरीको बिहे समयमै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको नेपाली समाजको नियम सायद मैले पालना गरिन। २, ४ वटा मंसिर त अब चाँडै बिहे गर्छु भन्दै तर्किएँ। जब विवाहको कुरा आउँछ मैले सुनेको नसुन्यैझैँ गरि हाँसेरै टारिरहेकी छु।
उमेर त्यति धेरै बितिसक्यो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन तर मसँगैका सबैजसो साथीहरूले विवाह गरिसकेका छन्। सबै छोराछोरीका अभिभावक भइसके। यिनै साथीहरुले पनि अब त बिहे गर भनेका भनै गर्छन।
कहिले कहिँ ‘बिहे गर्न किन मान्दिनस् ?’ भनेर आमा बाबाले पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ। मैले सहजै जवाफ दिन्छु लगन आइपुगेसी गर्छु। तर मेरो बिहे नभएको कुरा मेरो परिवारलाई भन्दा बढी छरछिमेकी र आफ्न्तलाई चासो छ। अब त बिहे गरे हुनी, ‘साथीसँगीको बिहे गरेर घरजम भइसक्यो’, यी यस्तै भनिरहेका हुन्छन् मेरा आफ्न्त र छरछिमेकीहरू।
केही दिन अघि मात्र अफिसबाट अलि चाँडै पुगेकी थिए कोठामा। साँझ म तरकारी काट्दै थिए। भाइ पनि बाहिरबाट आइपुग्यो, आउने बितिक्कै भन्दै थियो ‘फुपुको छोराहरूलाई भेटेको थिए।’ ‘के भन्नु भयो त दाइहरूले’ मैले सोधे। दिदीले बिहे नगर्ने रे, केटा कहाँ छ रे? यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइले सुनायो। चुपचाप बसेर सोचे, मलाई मतलब छैन् मेरो बिहेको कुरा अरुलाई कति हतार।
अब तिम्ले नि बिहे गर्नु पर्छ। तिम्रो केटा छ भने भन हाम्लाई होइन भने हामी खोज्छौ। उहाँको यो कुरालाई पनि मैले बुझे पनि नबुजेझैँ गरिदिए। हस्, हुन्छ, गर्छु भनेरै बसिरहेँ।
भर्खरै एक जना छिमेकी अङ्कलले भेटूँ नानी भन्नु भयो। हुन्छ भनेर भेट्न गए। अङ्कललाई पनि मैले बिहे नगर्दा ठुलै समस्या परे जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तिम्ले नि बिहे गर्नु पर्छ। तिम्रो केटा छ भने भन हाम्लाई होइन भने हामी खोज्छौ। उहाँको यो कुरालाई पनि मैले बुझे पनि नबुजेझैँ गरिदिए। हस्, हुन्छ, गर्छु भनेरै बसिरहेँ।
फुपुले बारम्बार फोन गरेर बिहे कै कुरा गर्नु हुन्छ। छोरीलाई सँधै माइतीमा बसेर पुग्दैन अब बिहे गर यस्तै के के भन्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि हस्, हुन्छ भनेर नै टारिदिन्छु। जति पनि आफ्ना आफन्त सँग भेट हुन्छ, कुरा हुन्छ सबैले भन्न भियाउँछन्। यसपालि त झ्याँइ पार्ने होलानी।
एक जना साथी उसले पनि भन्दै थि, ‘तिमीले बिहे कहिले गर्ने? यो मङ्सिरमा चाहिँ भोज खुवाउ है। खोइ, विवाहलाई मान्छेले कति महत्व दिएका होलान्? म सोच्छु।, अर्को अत्यन्तै नजिकको साथी फेसबुकमा म्यासेज लेख्दै थियो, विवाहको महिना त सकिन लाग्यो ‘तिम्रो विवाह कहिले हो?’ जवाफमा भने मेरो विवाहको भतेर खान तिम्लाई कति हतार?
यता घरमा हजुरआमालाई नातिनीको बिहे नखाई मर्छु की भनेर चिन्ता छ। उहाँले पनि बारम्बार मलाई बिहे गर्न अह्याइरहनु भएको छ। उहाँलाई नातिनी जुवाई छिट्टै ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। उहाँलाई मैले समय आएसी बिहे गर्छु भनेकी छु। खोइ, तेरो समय आउने कहिले हो कहिले? जुवाई नदेखी मर्छु क्यार भनेर कत्रो पिर छ।’ उहाँलाई पनि पिर नगर्नुस् छिट्टै बिहे हुन्छ भन्दै आएकी छु। अझै उहाँको लागि त मैले आफूले हेरेको केटा सँग बिहे हुन हुदैन, सबै घरपरिवारले हेरेर, रोजेर मात्र विवाह गर्नु पर्ने। विवाह जति ढिला गर्यो उति अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, छिट्टै बूढी होइन्छ।’ नानी उहाँले यसैगरी मलाई सचेत गराइरहनुहुन्छ।
उमेर गईसकेपछि कसैले पत्याउँदैनन् अनि पछुतो मानी रुनु पर्छ।’ विवाह उमेर पुगेर गर्ने होइन। कसैसगं मन मिल्छ, विचार मिल्छ, मानसिक रुपमा विवाहका लागि तयार भइन्छ तब विवाह गरिन्छ।
बाबालाई पनि उमेर पुगेर पनि बिहे नगर्दा कतै छोरीले नाक काटेर भाग्छे कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘अब तिमी पनि विवाह गर, विवाह गर्ने उमेर भैसकेको छ। उमेर गईसकेपछि कसैले पत्याउँदैनन् अनि पछुतो मानी रुनु पर्छ।’ विवाह उमेर पुगेर गर्ने होइन। कसैसगं मन मिल्छ, विचार मिल्छ, मानसिक रुपमा विवाहका लागि तयार भइन्छ तब विवाह गरिन्छ मैले यसै भनेर बाबालाई पनि सम्झाइराखेकी छु।
बहिनीले पनि हरेक दिन भन्छे, ʻदिदी विवाह गर, तैले बिहे नगर्दा बाबा आमा खुशी छैन्न्। अब एक्लै नबस।’ बहिनीको कुरामा म सोच्छु, के मैले विवाह गरे मात्र बाबाआमा खुशी हुन्छन्।
जताततै सधै मेरै बिहे कै कुरा, कहिलेकाहीँ त लाग्छ एउटा केटो टिपेर भाग्दिम। आमाले भन्नुहुन्छ, अब बिहे गर, विवाह भनेको समयमा नै गरेको राम्रो हुन्छ। भोलि समाजमा कुरा काट्न थाल्छन्। बाहिर हिड्ने, बोल्ने, उत्ताउली केटी भन्न थाल्छन्। बिहे नगरि बसेकी भनेर चरित्रमाथि औला उठाउछन्। मैले नबुझेको यति हो की, खुलेर जिउने कुनैपनि केटीको चरित्रमा प्रश्न किन उठाउँछ यो समाज। कुनै पनि केटी केटासँगै हिँड्दै गर्दा मेरो समाजले चरित्रमा प्रश्न उठाउँछ भनेर डराई डराई हिड्न किन पर्छ? ढिलो बिहे गर्ने बितिक्कै जो कोही केटीले किन लाल्छना र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ।
मनमा प्रश्न आउँछन्, के म केटी हुँ भन्दैमा कुनै केटासगँ बोल्न नपाउने? हिड्न नपाउने? कोही केटासँग हिड्दैमा त्यो मेरो ब्वोइफ्रेण्ड भैहाल्ने? जब कोही केटा केटी सँगै हिँड्दैमा केटीका बारेमा टिका टिप्पणी गर्नै पर्ने? आमालाई भन्ने गर्छु, कसैले कुरा काट्न सक्छन्, कसैसँग नाम चल्यो र बदनामी भइन्छ भन्ने डरले जवर्जस्ती भन्दा पनि म मेरो निर्णयले विवाह गर्छु।
र, पनि फेरी मैले आफैलाई प्रश्न गरे “के साँचिकै मेरो विवाह गर्ने उमेर भएको हो त ? बिहे त आफ्नो हिसाबले पो गर्ने हैन र? के एउटी केटीले बिहे गर्ने या नगर्ने निर्णय स्वयम् आफुले लिन पाउँदिन र?